स्वाद र औषधिले भरिपूर्ण अमलाको जुसमा पाईने फाईदाहरु जान्नुभयो भने तपाईंहरु खोजी खोजी खानुहुनेछ (भिडियाे हेर्नुस्) - Nawalpur Dainik
स्वाद र औषधिले भरिपूर्ण अमलाको जुसमा पाईने फाईदाहरु जान्नुभयो भने तपाईंहरु खोजी खोजी खानुहुनेछ (भिडियाे हेर्नुस्) । अमला प्रकृतिले दिएको अमूल्य उपहार हो । यसमा प्रशस्त मात्रामा भिटामिन सी पाइन्छ । अमला खानाले आँखाको शक्ति बढ्छ । रोचक त के छ भने साना बालबालिकालाई झाडा-पखाला लागेका बेला यो खुवाउँदा सोको नियन्त्रणसमेत गर्छ ।
आयुर्वेदिक दृष्टिकोणले पनि अमलाको महत्व धेरै छ । अमलामा रहेको तत्वले दिमाग तेज बनाउँछ । त्यसैगरी छालाका कतिपय समस्यालाई पनि हटाउँछ । अमला नेपालमा पाइने एक किसिमको रूख हो । यसलाई संस्कृतमा आमलकी भन्ने गरिन्छ । यसलाई औषधिको रूपमा पनि प्रयोग गरिन्छ । त्रिफलाको ३ औषधिमध्ये एक अमला गुणी जडिबुटीमा पर्छ । भनिन्छ ३ वटा सुन्तलामा भन्दा १ वटा अमलामा धेरै भिटामिन हुन्छ र अमलाको रुखको फेदमा छायाँमा बसेर खानाले मात्रै पनि अनेक रोगहरु निको हुन्छ ।
अमलामा विभिन्न रोगहरु निको पर्ने क्षमता हुन्छ । यसलाई सुख्खा चुर्णको रुपमा अन्य औषधिको रुपमा, अचारको रुपमा वा तितौराको रुपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ । यो सिजनमा अमला सजिलै पाइन्छ । स्वादमा अमिलो हुने अमलाको सेवनले हाम्रो स्वास्थ्यलाई धेरै फाइदा पुर्याउछ । अमलाको जुस बनाएर पिएमा धेरै रोगहरुबाट पनि बच्न सकिन्छ । समग्रमा अमलाको जुस औषधिय गुणले भरिपुर्ण छ । यसर्थ स्वाद र औषधिले भरिपूर्ण अमलाको अचार वा तितौराका साथै यसको जुस बनाएर पनि पिउने गरौं । यस्ता छन् अमलाका फाइदाहरु:-
५) अमलामा पानीको मात्रा पनि हुन्छ यसले पि-साब सम्बन्धी समस्या हटाउने गर्छ । अमलाले अनावश्यक नून, ए-सि-डलाई पनि पि-सा-बका माध्यमले बाहिर निकाल्ने गर्छ । यसका कारण युरिक ए-सि-ड, मिर्गौलाका समस्या हटेर जान्छ । ६) कोही मानिस उमेरै नपुगी बुढो देखिन्छन् । अमलाको नियमित सेवनले चाउरिएको अनुहार फुकाउँछ र बुढ्यौलीपनालाई कम गर्छ । अमलाको सेवनले अनिद्राको समस्या कम हुन्छ । अमलाको जुसले कस्ता रो-गहरु निको पार्छ पुरा जानकारी भिडियाेमा हेर्नुस्:-
Prevहोसियार! यि रोगीहरूले भुलेर पनि नखानुहोस अदुवा
Nextघरमा यी ६ चिज राख्नले मिल्दैन लक्ष्मी माताको साथ !!